Inona no atao hoe tondra-drano na ny teknikan'ny tondra-drano? | Tontolo alika
Inona no atao hoe tondra-drano na ny teknikan'ny tondra-drano?
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny fiofanana momba ny alika dia niatrika fanovana maro, ny sasany ho fisaorana bebe kokoa an'ireo mpanazatra toa an'i Turid Rugaas, izay nanoratra ny boky mahafinaritra "Signs of Calm: The Language of Dogs", nefa koa ny ratsy kokoa noho ny fiverenan'ny teoria alika. manjaka.
Mazava ho azy fa misy fomba maro hampiofanana alika, ary raha misy teknika hitantsika betsaka, indrindra amin'ny fahitalavitra, dia io no tondra-drano na ny teknika tondra-drano. Inona marina no tafiditra ao?
ankapobeny, dia toy ny hoe maka olona iray izay mikoropaka misidina ary mametraka azy ireo amin'ny fiaramanidina handeha hanao dia lavitra na aiza na aiza. Raha tsy naidin'ny mpampiantrano tamina fanafody fanaintainana ianao, dia azo inoana fa hiafara amin'ny fihenan'ny tachycardia na ny tebiteby ... farafaharatsiny. Mitovy tanteraka amin'ny alika. Raha matahotra ny afomanga ianao ohatra, raha entintsika any amin'ny Fallas dia tsy horaisintsika izy ireo; Ankoatr'izay, afaka mifanatratra amin'ny vokany mifanohitra amin'izany fotsiny izahay: ny fahatahoranao bebe kokoa ny afomanga, na izay nahatonga anao hahatsapa ho ratsy teo aloha.
Amin'ny olona ity teknika ity dia afaka manampy; Ankoatr'izay, izaho manokana dia nanana phobia bibilava ary nanomboka nanery ny tenako aho hijery horonantsary fanadihadiana momba ireo biby mandady ireo, very tsikelikely izany tahotra izany ary tiako izao. Tsy fantatro raha afaka mikasika azy ireo aho, saingy azo antoka fa tsy hihazakazaka aho raha sendra sendra iray. Ny alika, etsy ankilany, dia tsy manana izany fahaizana mifehy ny toe-javatra izany, koa raha matahotra zavatra izy ireo, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny tsy hanaja azy ireo.
Inona no atao hoe desensitization? Antsoina koa hoe »fipoahana voafehy», Teknika izay misy fampidirana miandalana sy miandalana ilay singa manelingelina ny biby ka tsy dia tsikaritr'izy ireo tamin'ny voalohany. Aorian'ny andro vitsivitsy, hampahafantarinay azy bebe kokoa amin'ny tontolo iainana. Avy ambanin'ny ambany ka hatramin'ny maro hafa, mandinika ny fihetsiky ny biby. Ohatra, raha matahotra ny afomanga izy ireo dia hoentinay milalao izy ireo ary mangataka namana iray hipoaka iray eo amin'ny 500 metatra eo ho eo; Raha tsy mihetsika ny alika, tsara, ny ampitso dia hangataka aminao izahay hanapoaka azy amin'ny 400m; Ary raha matahotra izy dia mijanona ary manandrana azy ny ampitso.
Raha misalasala, aza misalasala manatona mpanazatra alika miasa tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Inona no atao hoe tondra-drano na ny teknikan'ny tondra-drano?
Ahoana no hamahana ny tahotry ny alika amin'ny tohatra?